Myanmar Network တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း တစေ့တစောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Myanmar Network တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း တစေ့တစောင်း
Myanmar Network တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း တစေ့တစောင်း
Posted by manawphyulay on May 22, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 27 comments
21 ရက်နေ့ စနေနေ့မှာ မြန်မာနက်ဝက် အသင်းဝင်များ တွေ့ဆုံပွဲကို ဝင်ခွင့်နံပါတ်ရထားတဲ့အတွက် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနက်ဝက်အသင်းဝင်များ တွေ့ဆုံပွဲမှာ အသင်းဝင်အချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်စေခြင်းအပြင် နည်းပညာများ၊ ဗဟုသုတများကိုလည်း အလွန်တရာမှ တိုးပွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသင်းဝင်များအတွက် ဟောပြောပွဲ ပညာရေးဖလှယ်ပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂ နာရီအတိလို့ ပြောထားပေမယ့် ကျွန်မ Stand Hotel ရောက်သွားတော့ ၁၂ နာရီထိုးဖို့ ၁ဝ မိနစ်လိုပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့ ကြိုဆိုရေးနေရာရောက်တော့ ရောက်ကြောင်း စာရင်းပေးတော့ ၁၂ နာရီမှာ လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုလို့ ခဏစောင့်ရပါတယ်။ နောက် ၁၂ နာရီထိုးတော့ နံပါတ်နဲ့ နာမည် ကတ်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြလိုက်တော့ စာရင်းသွင်းပါတယ်။ နောက် ဗြိတိကောင်စီသံရုံးက စာရွက်လေးတစ်ရွက်ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို ယူသွင်းခွင့်ပြုမပြု ဖြည့်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ ဖြည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ နောက် အပေါ်ထပ်ကိုတက်ပြီး ထိုင်နေတုန်း အအေး သုံးဆောင်ပါလို့ လာပြောတော့ ထပြီး သွားရပါတယ်။ အသင်းဝင်တွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် သူတို့ ပထမ သတ်မှတ်ထားတာက ၁၂ဝ ဆိုပေမယ့် အသင်းဝင်တွေ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ၁၇၁ ယောက်ထိ လက်ခံခဲ့တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲ ပွဲရောက်တော့ ဂျာနယ်လစ်တွေပါ ဖိတ်ထားတဲ့အတွက် ကတ်နံပါတ်တွေက နည်းနည်းပိုသွားပါတယ်။ နောက် အသီးသီး ဟောပြောကြပါတယ်။ အစီအစဉ်ကို စတင်ကြေညာပြီး အစီအစဉ်မှာ ပါရှိတဲ့အတိုင်း
ဟောပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ဟောပြောမည့်သူတွေကတော့ နေ့ရက် – ၂၁ မေလ ၂၀၁၁ (စနေနေ့)
နေရာ – ကမ်းနားဟိုတယ်ခန်းမ (Strand Hall)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
၁၂းဝဝ မှ ၁၂း၃၀
Welcome drinks နှင့် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များပေးခြင်း
၁၂း၃ဝ မှ ၁၂း၃၅
၁၂း၃၅ မှ ၁၂း၅၀
British Council Director ၏အဖွင့်မိန့်ခွန်း
၁၂း၅ဝ မှ ဝ၁:၁၀
(မတင်မြတ်ထက် – Myanmar Blogger Society နှင့် Myanmar Youths in Action)
၀၁း၁ဝ မှ ဝ၁း၃၀
ဘလော့မိတ်ဆက် (ကိုမျိုးမြင့်ကျော်/ညအလင်္ကာ – စာရေးဆရာ၊ blogger)
၀၁း၃ဝ မှ ဝ၁း၅၀
အွန်လိုင်းဈေးကွက်ဖေါ်ဆောင်ခြင်း (ကိုမျိုးမင်း – Principal၊ PS Business School)
၀၁း၅ဝ မှ ဝ၂း၁၀
New Media, Culture and the Market (Matthew Sheader)
၀၂း၁ဝ မှ ဝ၂း၄၀
စားသောက်ဖွယ်ရာများဖြင့်ဧည့်ခံပါမည် (High Tea)
၀၂း၄ဝ မှ ဝ၄း၁၀
ပညာ၊ ပညာရေး နှင့် စိန်ခေါ်ကြသူများ (ဆရာဦးကျော်ဝင်း)
၀၄း၁ဝ မှ ဝ၅း၁ဝ
Speed Networking Game (အသင်းဝင်ချင်းအမြန်တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်သောအစီအစဉ်)
၀၅း၁၅ မှ ဝ၅း၂၅
ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးခြင်း – Imation အမျိုးအစား 8GB Memory Stick (၁ဝ) ခု
၀၅း၂၅ မှ ဝ၅း၃၀
အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ လူမှုအရင်းအနှီးများတိုးတက်စေရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်နိုင်သည် နှင့် အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းများအတွက် အသုံးချနိုင်သောအင်တာနက်ပေါ်မှ အရင်းအမြစ်များအကြောင်းကို Myanmar Blogger Society မှ အမှုဆောင်တစ်ဦး နှင့် Myanmar Youths in Action အဖွဲ့မှ မတင်မြတ်ထက်မှ တင်ပြပါမည်။
ချက်တင်နှင့် အချိန်ကုန်နေမည့်အစား ဘလော့တစ်ခုဖန်တီးရင်း မိမိအသိပညာများကိုဖြန့်ဝေနိုင်စေရန် ဘလော့တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းကို စာရေးဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ ဘလော့ရေးသားသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည့်
Myanmar Network အသင်းဝင် ကိုမျိုးမြင့်ကျော် (ညအလင်္ကာ) မှရှင်းလင်းပြောပြပါမည်။
အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး ဈေးကွက်ဖေါ်ဆောင်မှုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုမှာရှိသင့်သော လက္ခဏာများ၊ အသုံးတွင်ကျယ်လာသော လူမှုရေးဝက်(ဘ)
ဆိုဒ်များ နှင့် စီးပွားဖြစ်စာမျက်နှာများအကြောင်း ကို
PS Business School ၏ Principal ဖြစ်သူ ကိုမျိုးမင်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
The internet and new digital media representahuge change in the way media operates. Although many developments are still in an early phase, the spread of new technologies is beginning to have positive and
negative impacts on many aspects of human life. In this interactive presentation,
we will explore what the cultural impacts of new media are, and how business and
the market influences these. ဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက် အစားအသောက်စားပြီး ဦးကျော်ဝင်းက ပညာပေး၊ ပညာရေးအကြောင်းလေးတွေကို ရှေ့မှီ နောက်မှီအကျယ်တဝင့် ရှင်းပြပြီးနောက် ကြွရောက်လာကြတဲ့ မန်ဘာအဖွဲ့ဝင် လူ ၁၈ဝ လောက်ကို ကံစမ်းမဲနှိုက်မှာမို့လို့ နာမည်ကတ်ပြားနဲ့နံပါတ်တွေကို လာရောက်သိမ်းသွားပါတယ်။ ကံစမ်းမဲကတော့ ၁ဝ ယောက်စာအတွက်ပဲ ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ လူတွေ ဒီလောက်များနေတာ ဘယ်သူတွေ ကံထူးမလဲ စောင့်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီး ထိုင်နေတုန်း ဗြိတိသျှကောင်စီမှ လူကြီးက တစ်ခုနှိုက်ပေးပြီး အဆင့်ဆင့် နှိုက်ကြပါတယ်။ ၅ ခုကို မန်ဘာတွေထဲကပဲ နှိုက်ခိုင်းပါတယ်။ နောက် ကတ် ၁ဝ ခုကို မြန်မာနက်ဝက်တည်ထောင်သူမှ စတင် ကံထူးသူများကို ကတ်နံပါတ်ခေါ်ပေးပါတော့တယ်။ ကတ်နံပါတ်တွေကလည်း ၁၆၆ တို့ နောက်ပိုင်း ကတ်တွေ ပေါက်နေတော့ ကိုယ်က ရှေ့ပိုင်း ကတ်နံပါတ် ၅၁ ဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးလို့ တွေးနေတုန်း ကတ်နံပတ်ခေါ်နေရာကနေ ၅ ခုမြောက်ကတ်လည်းရောက်ရော ကတ်နံပါတ်မခေါ်တော့ပဲ မန်ဘာအားလုံးလည်း နာမည်သိအောင် နာမည်ပြောင်းခေါ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကို ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်မ တကယ်မထင်ထားတဲ့အတွက် ခဏတာမျှ ငေါင်တောင်တောင် ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ဘေးကတစ်ယောက်က အစ်မ… အစ်မကို ခေါ်နေတာလေဆိုတော့မှ ကံစမ်းမဲအဖြစ် မမ်မိုရီ ၈ ဂစ်ကို ထပြီး ယူလိုက်တော့ လက်ခုပ်သံတစ်ဖြောင်းဖြောင်းကြားရပါတော့တယ်။ ကျွန်မလေ ဘယ်လိုမှ ရမယ်လို့လည်းမထင်ထားမိတဲ့အတွက် အတော်ပဲ အံ့ဩပြီး ကိုယ်နဲ့အတူ ပါလာတဲ့အဖော်က ပြောပါတယ်။ အမနဲ့ ထီစပ်ထိုးချင်တဲ့လေ။ နောက်ပြီး ဆိုက်တည်ထောင်သူနဲ့ သံရုံးမှ လူကြီးက ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး မန်ဘာများထဲကလည်း ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်းပြောကြားရင်း အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းချိန်မှာတော့ ညနေ ၅ နာရီခွဲနေပါပြီ။ အပြင်မှာတော့ မိုးဖွဲဖွဲရွာနေပါတော့တယ်။ ပြန်လာတော့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ နည်းပညာများ၊ ဗဟုသုတစုံလင်စွာ ခဏတာအချိန်လေးတွေအတွင်းမှာ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် နောင်လည်း ဒီလိုပွဲများကို ဝက်ဘ်ဆိုက်အသီးသီးက ကျင်းပပေးရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့ တွေးနေမိပါတော့တယ်။
မန်းဂေဇက်က မောင်နှမတွေကိုလည်း ဒီလိုစုဝေးပြီး အပြင်မှာတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်ပေးမယ်ဆို အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်မ ပြောချင်နေမိပါတော့တယ်။
(မန်းဂေဇက်က မောင်နှမတွေကိုလည်း ဒီလိုစုဝေးပြီး အပြင်မှာတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်ပေးမယ်ဆို အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်မ ပြောချင်နေမိပါတော့တယ်။) မန်းဂေဇက်က မောင်နှမတွေ တွေ့ဖြစ်ရင်တော့ ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေ လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတော့ ကြိုတင်ပြီး သဂျီးကို တင်ပြရမယ်။ ကန့်သတ်ချက်ထဲမှာ လက်နက်ယူမလာရကိုတော့ ထည့်ရမယ်။ (ဆိုဒ်ထဲမှာ ထိုးနှက်နေကြဆိုတော့။)
လက်နက်မပါလည်း လည်ပင်းညှစ်လို့ရတာပဲလေ မမရဲ့
လည်ပင်းညှစ်ဖို့ကလည်း အားသန်ဦးမှလေ ညီမလေးရဲ့…
လူငယ်ပဲ အားသန်တာပေ့ါ …အဖွားလေးမနောရဲ့ …….etone ပြောတာ အပေါ်က အင်္ဂလိပ်လို မမ / MaMa ကိုပြောတာ …
တူနန် တူနန် တူနန်.. ဒိုင်းညွန့် ဆို တချက်တည်းပေါ့..
သဂျီးကို ပြောထားတယ် ဖားအောက် မှာ တရားထိုင်ဖို့… စိတ်မဝင်စားရင်
တောတောင် ရေမြေ ကြည့်ဖို့ မဟာမြိုင် တောထဲ အသွား တာဝန်ယူပေးတယ်
ရန်ပါယ်ချောင်း ရောက်မှ ကားပေါ်က တွန်းချပြီး လှည့်ပြန်လာခဲ့မယ်။
ကိရိယာ အားကိုးပြီး မိုက်ချင်တဲ့ သဂျီး ဂျီပီအက်စ် သုံးပြီး ပြန်လာလို့ ရမလား သိရအောင် စမ်းရမယ်။
အင်း… အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲနဲ့ပဲလာရမလား တုတ်တွေဒါးတွေပဲထမ်းလာရမလား သက်တော်စောင့်တွေပဲခေါ်လာရမလား ???
အဆင်ပြေသလို လာပါ.. လက်နက် ကြီး ယူမလာပါဘူး။
တရုတ်ကားတွေ ထဲကလို ဆံထိုးနဲ့ ပေါက်သတ်ရင် သေနိုင်တယ်တဲ့.. အပ်ထုတ် တထုတ် သယ်လာခဲ့မယ်။
သဂျီးကိုယ်တိုင် ကြွမြန်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ လက်နက်မယူလာရ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာနိုင်ပါဘူး။
ပွဲကတော့ ဖြစ်ဦးတော့မှာပဲ…. နေကြပါဦး သဂျီးလည်းစဉ်းစားတော်မူနေပါတယ်။
သဂျီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ အသေခံဗုံးခွဲသမားလွှတ်ပြီး ပန်းကုံးစွပ်ခိုင်းမယ်…
ကျနော်ကတော့အပြင်မှာတွေ့ရမှာကြောက်တယ်၊ ကိုယ်ရေးချင်တာတွေရှောက်ရေးထားမိလို့၊ ခေါင်းဖူးခြုံနေတာပြီးအော်နေတာပဲ ပဲကောင်းပါတယ်။
ရန်ကုန်မှ လူငယ်ခေတ်ပညာတတ်တွေ တွေ့ဆုံပွဲတွေ ဖြစ်မြောက်လာတာဟာ ခေတ်ရှေ့ပြေးဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် ရဲ့ ကောင်းတဲ့ နမိတ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ အထူးဘဲ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ တွေ့ဆုံပွမြျိုးဖြစ်စေချင်ရင်တော့ ဟောပြောသူ က သုံးလေးယောက် နားထောင်သူက သုံးလေးရာ ဆိုတာမျိုးထက် စားပွဲဝိုင်းဆွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆိုရင်ပိုပြီး အောင်မြင်ထိရောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံပွဲကို တက်လာကြသူတွေ က ကိုယအားသန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့ ဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်ပြီးမှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းပြီး၊ စားပွဲဝိုင်းစနစ် နဲ့ ဆွေးနွေးတာက ပိုထိရောက်ပါတယ်။
ဒီရွာက ကိုယ်ဖျောက်ရွာလေ … ကိုယ်ရောင်ပြလိုက်ရင် အခုလို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူး …
အားလုံးဆုံချင်ရင်တော့ အွန်လိုင်းမှာပဲ group chatting လိုမျိုးစုပြီး လေထဲကလဲ တိုက်ပွဲဝင်ကြတာ ပိုကောင်းပါတယ် …
အခုတလော ဆူးတောင် သိတဲ့ လူ ရှိနေလို့ နည်းနည်း ငြိမ်နေတာ.. ဒါတောင် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ မရေးဘူး ပါရင် လှည့်ရေးထားတာ တမျိုးလုံး ကိစ္စ ကုန်တော့မယ်။ ဟီးဟီး..
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ထိ ရှိနေပါ့မယ်
ဒီဆိုက်ထဲမှာ စကားလုံးတွေနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်ကြတာအားမရရင် လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ လာရောက်ထုနိုင်ပါကြောင်း..
ခံစစ်အတွက် အကျအနပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် လေကြောင်းထိုးစစ်ကိုသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး မြေပြင်တိုက်ပွဲအခြေအနေများကြုံလာပါက ကျွန်တော့်ဘက်မှလည်း စစ်ကူများခေါ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
(စတာပါ… အဲဒီရက်ပိုင်း ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိနေပါမယ်လို့)
ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ ….တို့ တွေ့ကြမလား။ အကောင်သေးလျှင် နှစ်ကောင်ပေးတယ် …
လေကြောင်း တိုက်စစ်ဆင်တာ သဘောကျရင် အီးတုံးပြောတဲ့ နှစ်ကောင်ကို လျက်ဆား ကြွေးလွတ်လိုက်မယ်။ လေကြောင်း စစ်ဆင်ရေး တကယ်ကြုံမှ ကြောက်ပါပြီ ဆိုပြီး မျက်နှာ အုပ်မပြေးနဲ့.. ဒါပဲ.. ;)
ဘားကန့်လိုပွဲမျိုးလုပ်ချင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟောပြောသူနဲ့ နားထောင်သူဟာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့်ရကြတာပဲလေ။ အချင်းချင်း ပညာ ဖလှယ်ကြပြီး ရင်းနှီးမှုပိုရှိတာပေါ့။ ဒီမှာက မမြင်ရဘူးဆိုပြီ နှိပ်မယ်ဆိုတာပဲ ချောင်းနေကြတာ များတယ်။ ခုလို တွေ့ဆုံပွဲလေးတွေလုပ်တော့ မျက်မှန်းတန်းမိသွားတာပေါ့ နောက်ကွယ်ကနေ ဓားမထောက်ရဲတော့ဘူးလေ…
ကိုင်း ဂလိုဆိုရင် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ အင်းလျားကန်နားက ကန်လမ်း Moon Bakery မှာ နေ့လည် ၂ နာရီကနေ ၃ နာရီထိ ကျွန်တော်ရှိနေမယ်ဗျို့.. အားတဲ့သူများ လာရောက်နိုင်ကြပါကြောင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ် အဝဝကို ကျွန်တော်က တာဝန်ယူ….. မဖြေရှင်းကြောင်းနှင့် American System ဖြင့် ပြုစုဧည့်ခံမည့်အကြောင်း…
၁ နာရီအတွင်း MG ကလူတွေ လာနိုင်ပါ့မလား
ခြောက်ရက်နေ့က မန်းဒေးကြီး ဘယ်သူကမှ လာမှာ မဟုတ်ဘူး
အာဟ….ဒါချိုနာလည်း…လာမယ်…… ဒါနဲ့ ဘာတွေပြောကြမှာလဲဟင်
တရားတွေ တိုင်းပင်မှာလား…ဟီး…အခုတလော တရားပိုစ့်တွေပဲဖတ်နေရလို့
တရားတွေ တိုင်းပင် မှာ မဟုတ်ဘူး.. အားလုံးကို တရားမှတ်ခိုင်းမှာ..
ရှုံး….လူရေ မလာနဲ့လို့ အင်ဒါရိုက်စပိနဲ့ ပြောလိုက်သလိုပဲ။ကုန်ကျစရိတ် အဝဝကို American သဂျီးက ကျခံမည်ဖြစ်ကြောင်းလို့ ပြင်ရေးလိုက်ရင် စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ဦးရေ တိုးလာမယ်။ ကိုယ်ကျခံရတာမှ မဟုတ်တာ။ သဂျီးလွှဲချလိုက်လေ။
မြန်မာပြည်ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် စာပေမိတ်ဆွေများနှင့် တစ်ကယ်ပဲတွေ့လိုလှပါတယ်.. ရန်ကုန်မှာလဲရှိနေမယ်၊ အချိန်လဲ ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တွေ့ကြတာပေါ့..
Yin Nyine Nway က ကလေးပဲရှိသေးတယ်နဲ့တူတယ်နော် … စကားတောင်မပီသေးဘူး … :PPP